Xog Waali Ah Oo Muujinaysa Sida Uu Weerarka Man United U Liitay Tan Iyo Muddadii Uu Sir Alex Ferguson Kooxda Ka Hawl Gabay. - GOOL24.NET
Xog Waali Ah Oo Muujinaysa Sida Uu Weerarka Man United U Liitay Tan Iyo Muddadii Uu Sir Alex Ferguson Kooxda Ka Hawl Gabay.
Manchester United ayaa tan iyo markii uu kooxdeeda ka hawl gabay ruug cadaagii Sir Alex Ferguson waxay ku soo jirtay xaalad aad u xun laakiin waxaa soo baxday xog waali ah oo muujinaysa ilaa xad heerka uu weerarka Red Devils u soo liitay tan iyo sanadkii 2013 kii wixii ka danbeeyay.
Sir Alex Ferguson ayaa Manchester United ka soo caawiyay 13 koob oo Premier league ah waxayna koobabka sidan u badan ku soo guulaysatay 21 sanadood gudahood balse tan iyo markii uu baxay Sir Alex Ferguson waxay United noqotay koox kaalmaha sare ee Champions league u tartanta oo xataa mararka qaar soo seegtay.
Haddii ay Manchester United ku soo dhibtoonayay Premier league waxaa heerka ugu fiican ku soo jirtay kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City oo kulankii ugu danbeeyay 6-1 ku xasuuqday Southampton isla markaana diyaar u ah in ay xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ay difaacato Premier league.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xog waali ah oo si cad u muujinaysa sida uu weerarka Man United u soo liitay tan iyo May 2013 kii wixii ka danbeeyay waana xog ay xataa kooxo aad u yar yar oo heerarka hoose ahi kaga sareeyaan Man United.
Manchester United ayaan hal kulan guul ku gaadhin 5+ gool kulan Premier League ah tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 laakiin waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa kooxihii 5 gool ama ka badan guul ku soo gaadhay horyaalada ay ka tirsan yihiin waqtigan.
Haddaba halkan kaga bogo Dhamaan Kooxaha iyo tirada kulamada ay Guul ku soo gaadheen 5+ gool tan iyo May 2013 kii markii ugu danbaysay in ay Man United guul ku gaadhay 5 gool ama ka badan.
1-Manchester City 21 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
2-Liverpool 12 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
3-Tottenham 9 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
4-Arsenal 8 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
5-MK Dons 8 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
6-Peterborough 8 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
7-Bournemouth 7 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
8-Chelsea 7 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
9-Brentford 6 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
10-Derby 6 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
11-Hull 6 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
12-Bristol City 5 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
13-Cambridge 5 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
14-Norwich 5 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
15-Watford 5 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
16-Accrington 4 kulan oo ay guul ku gaadhay 5+ tan iyo wixii ka danbeeyay May 2013 kii.
Sida aad xogtan ka arki karto 16 kooxood ayaa kulamo badan guulo ku soo gaadhay 5 gool ama ka badan lakaiin tan iyo May 2013 kii oo ahaa sanadkii Sir Alex ugu danbeysay Man United ayayna Red Devils hal kulan guul ku soo gaadhin 5 gool ama ka badan waana dhaliil si cad u muujinaysa sida uu weerarka kooxdeedu u soo liitay,
Waa ku mahad san tahay sida hufan eed noogu soo war bixisay fadllan nooga soo war bixi Iibsashada man untd iyo qaabka loo iibsanayo
WARBIXIN: Wargeyska MARCA Oo Cod Ka Ururiyay Jamaahiirta Spain & 12 Xiddig Oo Ay Kamid Yihiin David De Gea Iyo Sergio Ramos Oo War Aan Fiicnayn Helay.